Breaking : त्रिशुलीमा बस खस्यो, ६ जनाको मृत्यु - Muldhar Post
Breaking : त्रिशुलीमा बस खस्यो, ६ जनाको मृत्यु
मूलधार सम्वादाता २०७४, १३ मंसिर बुधबार 452 पटक हेरिएको
काठमाडौँ – काठमाडौँबाट अर्घाखाँचीतर्फ जाँदै गरेको बस त्रिशुली नदीमा खसेको छ ।
लु २ ख २९१ नम्बरको यात्रुवाहक वस फिस्लिङ नजिकै रहेको चुम्लिङटारमा बिहान ९ बजे आसपास दुर्घटनाग्रस्त बनेको हो ।
घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ भने १० जनाको उद्धार भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रकको ठक्करबाट दुर्घटना भएको ड्राइभरले बयान दिएको बताइएको छ । बस नदीमा खसेपनि डुबिनसकेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ ।
प्रहरीको टोली अहिले उद्धारका लागि घटनास्थल पुगेको छ ।
बाँकी विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।
यी हुन सम्भावित मुख्यमन्त्री र प्रदेशका राजधानी
‘मलाई भोट दिनुभयो भने प्रदेश १ को राजधानी बिराटनगर हुनेछ ।’ मोरङमा प्रतिनिधिसभाको चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको वामगठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारको एउटै एजेण्डा छ । धनुषामा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारले पनि जनकपुरलाई प्रदेश २ को राजधानी बनउने भन्दै भोट मागिरहेका छन् । प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिशमा प्रदेश सभाले तोक्न पाउने व्यवस्था छ ।
तर चुनावी प्रचारमा भने प्रदेश होइन प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले नै प्रदेशको राजधानी ‘फलानो ठाउँमा बनाइदिन्छौं’ भन्दै मत मागिरहेका छन् । क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मत मागेर मतदाता झुक्याउने काममा उच्चतहका नेताहरु बढी देखिन्छन् । ’
मोरङमा कांग्रेसका महामन्त्री शेखर कोइराला, नेता मिनेन्द्र रिजाल, जनकपुरका लागि विमलेन्द्र निधीले प्रदेशको राजधानी बनाइदिने भन्दै भोट मागिरहेका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारमै नभएको काम गर्छु भनेर भोट माग्नु मतदाताको अपमान हुने राजनीतिक विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसीको टिप्पणी छ । ‘जसको क्षेत्रमा नै पर्दैन उसले कसरी त्यो काम गर्नु भन्दै मत माग्न सक्छ ’ केसीले भने, ‘चुनावअघि नै मतदाताको अपमान गर्नेले पछि के गर्लान त्यो मतदाताले बुझ्नुपर्छ । ’
सातवटै प्रदेशमा सम्भावित दुई र त्यो भन्दा बढी शहरहरु छन् । ती क्षेत्रका प्रदेशसभा र प्रतिनीधिसभाका उम्मेदवारहरु सबैजसाले राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने एजेण्डासहित भोट मागिरहेका छन् । वामगठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नेताहरुबीचमा नै ठाउँका विषयमा फरक फरक मत रहेको छ । तर, प्रदेशसभाको चुनाव भने छायामा परेको छ । प्रदेशको चुनावी रौनकलाई प्रतिनिधिसभाले पूरै ओझेलमा पारेको छ ।
पहिलो चरणमा १० गते भएको र दोस्रो चरणमा २१ मंसिरमा हुने निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र प्रदेश सभाका ५ सय ५० सदस्य चुनिंदैछन् । निर्वाचनपछि एक संघीय संसद् र सात प्रदेश सभा गठन हुनेछ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक संघीय संसद्को परिकल्पना गरिएको छ ।
संघीय संसद्ले पूर्णता पाएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाका गठन हुनेछ । प्रदेश सभा गठन हुनुभन्दा पहिले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई छ । स्थायी राजधानी भने प्रदेशसभाले नै तोक्नेछन् । ‘संविधानमा राजधानी तोक्नेदखि त्यसको सञ्चालनको व्यवस्था प्रष्ट नै छ’ स्थानिय निकाय पुनर्संचना आयोगका संयोजक वालानन्द शर्मा भन्छन्‘अधिकारदेखि व्यवस्थाका विषयमा प्रष्ट हुँदा हुँदै प्रतिनिधिसभाका सदस्यको एजेण्डा प्रदेश राजधानी बन्नु महत्व नबुझ्नु हो । ’
सम्भावित मुख्य मन्त्री
प्रदेशसभाको निर्वचनमा दोस्रो तहका नेताहरुमात्रै प्रतिस्पर्धामा रहेपनि सम्भावित मुख्य मन्त्रिका रुपमा धेरैको चर्चा रहेको छ । पार्टीको उपल्लो कमिटीका नेताहरु कम मात्रै छन् । प्रत्यक्षमा प्रदेशसभामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका एमाले नेता शंकर पोखरेल सबैभन्दा ह्यावी नेताका रुपमा छन् । ती वाहेक जति प्रभावशाली नेता प्रदेश सभामा उम्मेदवार छन् ती सबैले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन पाएका छन् ।
प्रदेशतर्फका उम्मेदवारहरू एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य, शेरधन राई, सत्यनारायण मण्डल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पशुपति चौलागाई, सानुकुमार श्रेष्ठ, राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, अरुण नेपाल, माओवादी केन्द्रबाट कुलप्रसाद केसी, महेन्द्रबहादुर शाही, नरेश भण्डारी जस्ता केन्द्र तहका नेताहरु छन् ।
कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही,जगदीश्वरनरसिंह केसी, जनकराज गिरी आङगेलु लगायतलाई सम्भावित मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ । ती मध्ये जिल्ला सभापति पनि मुख्यमन्त्रीको दावीसहित प्रदेशसभाको चुनावी दौडमा देखिएका छन् । एउटै प्रदेशबाट एकदलका कम्तिमा आधा दर्जन नेताले मुख्यमन्त्रीको दावी गरेका छन् ।
कुुन प्रदेशको राजधानी कहाँ ? अहिले दलभित्रै पनि विवाद र बहसको विषय बनेको छ । २१ गते दोस्रो चरणको चुनावपछि त्यो सतहमा आउनेछ । सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया सुरु नगरेकाले पनि त्यसमा थप विवाद हुने देखिन्छ ।
१ नम्बर प्रदेशमा इटहरी धरान बिराटनगर बहसमा छन् । त्यो वाहेक इलाम, धनकुटा पनि सम्भावित राजधानीमा रुपमा हेरिएको छ । ती ठाउँमा उच्च अदालत रहेका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ मा जनकपुर र बीरगञ्जलाई राजधानीका रुपमा बाहिर ल्याइएको छ । त्यो वाहेक राजविराज पनि सम्भावित राजधानीका रुपमा हेरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ मा काठमाण्डु वा चितवन भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । त्यो सँगै हेटौंडा पनि बहसमा रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ४ मा पोखरा निर्विकल्प मानिएको छ । तर बाग्लुङलाई पनि सम्भावित राजधानी हुनसक्ने जिल्लाका रुपमा हेरिएको छ । त्यहाँ दुईवटा पुनरावेदन अदालत छन् ।
प्रदेश नं नम्बर ५ मा बुटवल, नेपालगञ्ज राजधानीको चर्चाका रुपमा रहेका छन् । प्रदेश नम्बर ६ मा सुर्खेतलाई राजधानीका रुपमा चर्चामा ल्याइएको छ । तर सँगै जुम्लाका विषयमा पनि बहस भइरहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा कैलाली, कञ्चनपुरलाई सम्भावित राजधानीका रुपमा चर्चामा ल्याइएको छ । त्यो वाहेक दिपायल, डडेल्धुरालाई पनि सम्भावित राजधानीका रुपमा हेरिएको छ ।
संविधानको धारा २८८ मा प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाले कायम गर्ने व्यवस्था छ। उक्त धारा अनुसार, ’प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ।’ त्यो प्रदेशसभा चाहिं कहाँ बस्ने? संविधानसभा भवनमा या सिंहदरबारमा? कि अलि समय अन्तरिम राजधानी बनाएर प्रदेशभित्रकै कुनै शहरमा बस्ने? अझ् दुईतिहाइको प्रावधानले त प्रदेश राजधानी बारम्बार फेरिन पनि सक्छ ।